Bhuvan Devkota : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
-Bhuvan Devkota धेरै पटक हाम्रा अन्य धर्म मान्ने मित्रहरूले कुरै नबुझी हावामा हामी येशूका अनुयायीहरूलार्इ व्यभिचारी भन्ने गलत अाक्षेप लगाएको सुन्दा नमज्जा लाग्छ । अझ बाइबलको एउटा पद लिएर वा त्यसलार्इ बङ्ग्याएर जब्बरजस्ती अफ्नो गलत तर्क प्रमाणित गर्ने कोसिस गर्ने अाधा गाग्रो पानीझैं उम्लने विव्दत् महोदयहरूले बाइबल पूरा पढेर विरोध गरेको पो असल, कि कसो […]
जन्म तथा बृहत् कामको तयारी: १ देखि २० वर्षको उमेरसम्म > जन्मः २४ अप्रिल १९३०, आमा सूर्यमती रोंगोंग र बुबा आथिङ जोसेफ रोंगोंगबाट दोस्रो सन्तानको रूपमा > सानै हुँदा आमा सूर्यमतीले पास्टर राजेन्द्र रोंगोंगलाई नेपालको लागि अर्पण गर्नुभयो । > सानै हुँदा आमाले घरमा संचालन गर्ने बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुनुभयो । सानैदेखि नेपाल आउने रहर […]
[0] March 29, 2018	| Bhuvan Devkota
-भुवन देवकोटा हाम्रा मुक्तिदाता प्रभु येशू यस संसारमा सारा मानिसको पापको लागि आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो । मानिसजातिको पक्षमा येशूले आफ्नो पवित्र र सिद्ध शरीरमा दिनुभएको पापको बलि परमेश्वरले ग्रहण गरेर मानिसजातिलाई क्षमा दिनुभयो र हामीले स्वर्ग जाने सौभाग्य पायौं । सारा मानवजातिको मोक्षको योभन्दा अर्को उपाय छैन । येशूले मानवको लागि प्राण दिनुभएको दिनलाई […]
-भुवन देवकोटा, अचेल येशूलाई विश्वास नगर्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जानी वा नजानी विभिन्न तरिकाले र विभिन्न आक्षेपहरू लगाउँदै ख्रीष्टियानहरूलाई गाली गर्ने कुरा बढ्दैगएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसरी लगाएको हरेक आरोपलाई जवाफ दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने केही अपरिपक्व र चञ्चल ख्रीष्टियान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले त्यस्ता आरोपहरूको जवाफ तुरुन्तै दिएका कुरा पनि हामीले […]
-भुवन देवकोटा, भर्खरै विश्वास गरेर हुर्कंदैगरेका पावललाई कसैले नपत्याएर प्रभुबाट गलहत्तिने स्थितिमा बारनाबारसले भेटेर प्रेरितहरूकहाँ लैजान्छन् । बारनाबासले नभेटेका भए सायद उनको जीवन यति प्रभावकारी हुनेथिएन होला कि ? तिनै पावल पछि नयाँ करारको मण्डलीका लागि ठूलो प्रेरणास्रोत बने किनभने उनलाई परमेश्वरले विशेष किसिमले प्रयोग गर्नुभयो । तिनै पावलले नै मण्डलीका लागि आवश्यक सबै कुरा […]
-भुवन देवकोटा मण्डलीलाई परमेश्वरको घरानाको रूपमा पवित्रशास्त्रले चित्रित गरेको छ । मण्डलीमा भएका परिवारहरूलाई मण्डलीको एकाइको रूपमा मान्दा कुनै आपत्ति होवोइन । ती परिवारहरूको बृहत् संरचना मण्डली परिवार हो । त्यसकारण मण्डली बलियो हुने हो भने मण्डलीको एकाइ बलियो हुनुपर्छ । मण्डलीको संवृद्धिको लागि परिवारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, बाइबलीय शिक्षा र त्यसको अभ्यासमा । हरेक परिवारमा […]
-भुवन देवकोटा विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक उन्नतिका नाममा वर्तमान मानव समाज यति अगाडि बढेको छ कि त्यसको अगुवाइ गर्नेहरूले आफूलाई सर्वशक्तिमान र ईश्वरतुल्य मान्न थालेका छन् । येशूलाई नचिन्ने कति सम्प्रदायमा मानिसलाई ईश्वर मानेर पूजा गर्ने चलन साधारण कुरा हो । आफैंलाई पुजिएको मान्ने चर्चित मान्छेहरू र त अन्धाहरू हुन् । अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने […]
वर्तमान नेपाली चर्चमा अहिले दुइ खाले खतराजनक धार देखिँदैछन् । १. व्यवस्थावादी अथवा बाहिरी कर्मलाई मान्यता दिने पावलले गलातीको मण्डलीलाई हप्काएका थिए किनकि उनीहरूले आत्मामा सुरु गरेर शरीरमा शेष गर्न लागेका थिए । अहिले त्यही कुरा नै कतिपय नेपाली मण्डलीमा घुस्न लागेको छ । हो, हामी सबैको उद्धार येशू प्रभुको क्रुसको मृत्युले सम्भव गराएको हो । […]
-भुवन देवकोटा, जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो, “मानिसहरूले मेरो बारेमा के भन्दछन् ?” कतिले एलिया, कतिले अगमवक्ता, अरू विभिन्न कुराहरू येशूको बारेमा भन्छन् भन्ने कुरा चेलाहरूले भने । तर जब येशूले अझ गहिरिएर व्यक्तिगत प्रश्न सोध्नुभयो, “तिमीहरूचाहिं के भन्छौ ?” पत्रुसले तुरुन्तै जवाफ दिए, “तपाईं जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ । अनन्त जीवनका वचनहरू तपाईंसँग […]
मण्डली किन बोल्दैन ?
[3] March 24, 2015	| Bhuvan Devkota
भुवन देवकोटा, वर्तमान नेपाली समाज बलात्कार, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, थुप्रै पाशविक कुराहरूको कारणले आक्रान्त छ। समाजका अवहेवहरू दिनानुदिन भत्किँदै छन्। समाजमा कमजोरहरू आजभन्दा भोलि झन असुरक्षित देखिँदैछन्। उनीहरूको पक्षमा, उनीहरूको सुरक्षामा कोही छैनजस्तो देखिंदैछ। कसले उनीहरूलाई माया गर्ने भन्ने सन्त्रास चारैतिर फैलिएको छ। कसैले सानी छ वर्षी नानीलाई बलात्कार गरेर मारिदिन्छ। कसैले बुढी हजुरआमाको शरीर […]
भुवन देवकोटा, बाइबल धर्मशास्त्रमा उल्लेख भएअनुसार हामी विश्वासीहरू एउटै परिवारका सदस्य हौं। हामी येशूको रगतले किनिएपछि एउटै परिवारभित्र समाहित भएका छौं। त्यसैले हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौं। परमेश्वरले हामी सबैलाई मण्डली परिवार, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा उहाँले चाहनुभएको भूमिका दिएर राख्नुभएको हुन्छ। पाठकवृन्द, मैले यहाँ चर्चा गर्न लागेको विषय हामी हाम्रो भावी पुस्ताका लागि कस्तो नमुना भएर […]
फेब्रुअरी महिनालाई भ्यालेन्टाइन महिनाको रूपमा मनाउनेहरूको जमात आजभोलि बढ्दैजान थालेको छ। यहाँनेर हामीले बाइबलको एउटा वाक्य सम्झनैपर्दछ। जहाँ पावलले भन्दछन् कि दुष्टचाहिं यस संसारको देव हो, आकाशको शक्तिको मालिक हो। अहिले हामीले संसारमा देखेका धेरै कुराहरू दुष्टको अधीनमा छन् र दुष्टबाट सञ्चालित छन्। किनभने बाइबलले लेखेको छ- संसार दुष्टको अधीनमा परेको छ। दुष्टले परमेश्वरका सन्तानलाई […]
परमेश्वरको योजना र छनौट कस्तो अचम्म रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न निकै कठिन रहेछ। परमेश्वरले सबै कुराबाट पक्कै भलाइ उत्पन्न गर्नुहुँदोरहेछ भन्ने कुराको स्वाद हामीले भर्खरै पायौं। तपाईं प्रिय पाठकहरूको उत्साहको लागि हामी दुवैले हाम्रो अनुभव बाँड्ने साहस गरेका छौं। गत जुलाइ १९ तारिख शनिवार म भारतको सिलिगुडीबाट फर्किएँ। वास्तवमा मलाई लोक दाजु र परिणा भाउजूले […]
[0] September 22, 2013	| Bhuvan Devkota
देश र दुनियाँलाई लुटेर सिसमहल ठड्याउनेहरूलाई सबैले आदरणीय र ठूलो मानेकोले केहीको प्रेरणा त्यही कुरा बन्दै छ। राजनैतिक वा अन्य व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थको लागि किशोरहरूको प्रयोग गर्ने डरलाग्दो चलन बढेको छ। मोटरबाइक, मोबाइल र मस्ती नै जीवन हो भन्ने भ्रामक शिक्षाले नेपाली किशोर पुस्तामा आपराधिक मनोवृत्तिले जरो गाड्न थालेको छ। कानुनले शासन गर्न बिर्सन […]
[0] April 24, 2009	| Bhuvan Devkota
कविता कवि होस्, कवि कविता होस् तब पो हुन्छ शब्द थुपारीकन के हुन्छ? भाव भए पो पुग्छ कुनै एकजना नेपाली साहित्यकारले कविताको बारेमा यसरी भनेका थिए। साहित्यलाई पनि त्यही ओजनमा मापन गर्दा सुहाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। साहित्य समाजको ऐना हो भने यसले समाजको कुरा बोल्छ। समाजको ऐना मात्रै नभएर साहित्य समाजको पथप्रदर्शक पनि हो। समाज […]
नेपाली ख्रीष्टियान युवाहरूलाई खुल्ला पत्र प्रभुले धेरै माया गर्नुभएका मेरा प्रिय मित्रहरू, आरामताको खबर लेखेर आफू सञ्चो भएको अभिनय गर्न मलाई मन लागेको छैन। मित्र, तपाईंलाई यो पत्र लेखिरहँदा मेरो मन रुँदै छ। यो पत्र मेरो अर्न्तर्मनको वेदना र वन्दन हो। यो पत्र लेख्नुअघि मैले धेरै हप्ता आफ्नो मनलाई रुवाएको छु। अब त मन थाम्न […]
यो प्रश्न म नेपालको मण्डली, त्यसका अगुवाहरू र विभिन्न तहका नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई गर्दै छु। समयले हामीलाई वास्तविकताबाट गलहत्याउनुअघि नै हामीले परिवर्तनकारी हस्तक्षेप नगरे नेपालको मण्डलीको भविष्यमा प्रश्न उठ्नेछ। परमप्रभुसँग सबै कुराको लागि विकल्प छ भन्ने विश्वास दरिलोगरी मनमा रहेकै अवस्थामा यो प्रश्नले हाम्रो आंखा खोलिदेला भन्ने मेरो हार्दिक चाहना छ। धेरैको मनले ठम्याए पनि वा […]
म तपाईंमा रमाउनेछु र उल्लसित हुनेछु। हे सर्वोच्च प्रभु, तपाईंको नाउँमा म स्तुति गाउनेछु, भजनसंग्रह ९:२। हामीले जस्तो पनि सङ्गीतलाई त्यतिकै स्वीकार गर्न थालिसक्यौं। ख्रीष्टिय भजनका प्रकाशकहरूले पनि बाइबलीय मापदण्डलाई नमानेको र कलाकार बन्ने होडमा वा शुद्ध विवेकमा केहीले आफ्नै प्रयासमा गरेको मेहनत पनि अलिकति विचार नपुर्याउँदा खल्लो बनेको छ। युवाहरूमा सङ्गीतको ठूलो प्रभाव हुन्छ। […]
मण्डलीकी आमा भनेर पश्चिम नेपालमा चिनिएकी सुश्री ज्ञानी शाह नेपालको पहिलो महिला आर्मी हुन्।नेपालको मण्डली इतिहासकी धरोहर ज्ञानी नेपालको राजपरिवारसँग पनि जोडिएकी व्यक्तित्व हुन्।भारतको पटनामा येशूलाई भेटेर उहाँको सेवा गर्ने चुनौती पाएकी खरो तर मायालु स्वभाव भएकी ज्ञानी स्वयं इतिहासको दस्तावेज मात्रै नभई, युवा पुस्ताको लागि प्रेरणा र चुनौतीकी खानी हुन्।त्यो समय राजदरबारबाट ख्रीष्टमस उपहार […]